SAHORANA FENOARIVO - ATSINANANA : Fiara sprinter nivadika, 10 naratra
Nisehoana lozam-pifamoivoizana tao amin’ny fokontany Sahorana lalam-pirenena fahadimy mampitohy an’i Fenoarivo-Atsinanana sy Toamasina ny marain’ny sabotsy 21 septambra lasa teo. 23 septembre 2019
Fiara sprinter manao zotra Fenoarivo-Atsinanana sy Toamasina niala tamin’ny 3 maraina tao Fenoarivo io tra-doza io. Vao 4 km monja, niala ny tanànan’i Fenoarivo-Atsinanana no nitrangan’izany. Raha ny fanazavan’ny mpandeha tao anatiny, dia nisy vato be maromaro nisy nametraka teny amin’ny lalana. Somary nandeha mafy ihany koa ny mpamily ka tsy voatazony intsony ny familiana rehefa niantefa teny amn’ireo vato ny kodiarana.
Vokany, mpandeha miisa 10 naratra. Ny telo no tena voa mafy. Ny roa izay samy naratra teo amin’ny loha avokoa. Tao ny nivoaka ra avy anaty sofina. Tsy nisy kosa ny aina nafoy. Efa samy nahazo fitsaboana sahaza avokoa ireo mpandeha naratra.
Sotasosa sa saika hanafika ?
Mbola mifamaofao ny mety ho antony nisian’ny vato be nirantiranty teny amin’ny lalana akaiky ny tanànan’i Sahorana Fenoarivo-Atsinanana io. Ao ny milaza fa gafy atan’ireo olona mamo avy namonjy tsaboraha. Tsara mantsy ny manaramarika fa tsy nisy entana very. Ao kosa no miteny fa fikasana hanafika fiara mpitondra lavanila no ambadak’io vatobe io. Efa mandeha ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana any an-toerana.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68193) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (637) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (334) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (226) 19 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (215) 18 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (193) 18 février 2020